I-La Sexta itshintsha i-logo yayo: Ilungile okanye ayilunganga? | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Inethiwekhi kamabonwakude waseSpain yenze utshintsho kumfanekiso wayo wobumbano ngenxa yayo Ishumi leminyaka okuthe kwavusa impikiswano: Abanye bayiqonda njengenyathelo eliya phambili ekuqinisekiseni ubuni babo kunye nesimbo, nangona abanye bekubonile njengembudane oza kudlala ngokuchasene nomfanekiso wabo. Njengoko usazi, le khonkco yityathanga ngokubanzi leqela leAresmedia kwaye yinto efuna ukukrwela kwimbonakalo yayo entsha ngokulungelelanisa i-tonic evisisanayo namanye amalungu anje nge-Antena 3 okanye i-Neox. Ukwenza oku, isisombululo esisicaba kunye nezejiyometri sisetyenzisiwe, ekuthe ngokuhamba kweminyaka kwaba lula ngakumbi.
Isiphumo sokugqibela kukuncitshiswa kwesakhiwo esenziwe ziityhubhu ezilungiswe kwi-silhouette ye-6 kwaye zenza i-gradient yeethoni eziluhlaza ukusuka kwisisombululo esikhanyayo ukuya ekugqibeleni esimnyama kakhulu kunye nokukhulula ezintandathu zethu kwimvelaphi eluhlaza ebonelela ngakumbi ubukho obuqinileyo kumxholo. Kwigama leetyathanga, islab typeface is used, Ibhotoni.
Ngokombala Uluhlaza luhlala luphawu olungachazwanga nangona ngoku iithowuni eziluhlaza ezichukumisa abamnyama zithatha ubukho obukhulu bokuqaqambisa iithoni eziluhlaza. Apha ngezantsi ungabona ukuvela kwayo kunye nevidiyo apho kuboniswa isazisi esitsha sekhonkco. Ngokwam ndicinga ukuba ibeyindlela enempumelelo kakhulu, ucinga ntoni?
Https: //www.youtube.com/watch? V = bDXXHKW5F94
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » I-La Sexta itshintsha i-logo yayo: Ilungile okanye ayilunganga?
UAlberto Escudero sitsho
Ewe, andiluthandi utshintsho. Benze lula imilo kwaye bayisondeza ngakumbi kwisitayile esine-logo yemithombo yeendaba. Ukubeka ukubamba ndiyithandile ifonti yeSan serif ngcono.
Phendula u-Alberto Escudero